I-china Logistics Division abakhiqizi nabaphakeli | KAIHUA
Isixazululo nokwenza isikhunta sokwenza i-dustbin, i-pallet, ikesi njll. Iningi lesikhunta lithunyelwa kumakhasimende aseYurophu naseMelika emakethe. Okwamanje singakwazi ukuphakela isikhunta esikhulu ngesisindo esifinyelela ku-90T.
Siyakwazi ukwenza isikhunta se-dustbin sisuke ku-40L kuye ku-3200L. Ngolwazi olucebile esiluthole unyaka nonyaka, isikhunta sethu singaba nesikhathi esisheshayo kakhulu somjikelezo nempilo ende yesikhunta. Singahlinzeka ngezixazululo zokubumba amakesi ezimboni kanye namakhreyithi amakhulu ezolimo. Ngokutadisha okujulile ngokuthi ungaziguqula kanjani izinhlobo kalula, sisiza iklayenti lethu ukonga izindleko zesikhunta nezokukhiqiza. Akunandaba ukuthi incanyana, isibambo esilula noma isibambo esihlanzekile, esizinzile sokudla, ingxenye yenhlanzeko. Isikhunta sethu sihlala sakhiwe nesikhathi esifushane somjikelezo kanye nokushintsheka kalula. Okwamanje, singanikeza insizakalo yokuhlaziywa kokulayisha okunamandla nokuma.
Isikhunta esihle silele kumklamo omuhle.
Ngokucwaninga kanye nontanga abahle nabasekhaya nasemazweni aphesheya, ithimba lethu lokuklama alihle kuphela ku-2D, imikhiqizo ye-3D nokwakhiwa kwesikhunta kepha futhi liletha inani elikhulu njenge- "esebenza kahle" nelithi "engasindi" ngangokunokwenzeka kumakhasimende ethu.
Umklamo wethimba lomkhiqizo: sisiza amakhasimende ku-B side design kanye nokwenzeka kokuhlaziywa. Ngomklamo noma ngaphandle kwawo, singathuthukisa ukwakhiwa komkhiqizo ngokuya ngezidingo.
Ithimba le-CAE: lenza ucwaningo kanye namakhasimende ethu, njengokuhlaziywa kokulayishwa, ukuhlaziywa kwamandla, igesi noma ukulingisa amagwebu njll.
Isikhunta sokuqamba: sithembele kokuhlangenwe nakho okucebile nangesoftware esezingeni eliphakeme, singaphendula ngokushesha kuzidingo zamakhasimende bese sakha idizayini elula ukuyisebenzisa, kulula ukuyisebenzisa, ukulondolozwa okulula, futhi iphephile ukwenza umkhiqizo.
■Ama-5 axis CNC amaqembu: I-DMG evela eJalimane, u-OKUMA noMAKINO baseJapan, i-FIDIA yase-Italy. IMax.stroke ingu-4000 × 2000 × 1100mm
■Amaqembu e-EDM: I-DAEHAN isikhungo semishini esisebenza kabili nesine-EDM esivela eKorea. IMax.stroke ingu-3000 × 2000 × 1500mm
■Milling isikhungo: Kuraki ovundlile kuyisidina futhi Milling machining isikhungo kusuka Japan. Ukujula kokusika kukaMax kungu-1100mm.
■Amaqembu e-CMM: I-WENZEL evela eJalimane, i-HEXAGON evela eSweden ne-COORD yase-Italy. Isifo sohlangothi sokulinganisa singu-2500 × 3300 × 1500mm.
■Abanye: Imishini yokuhlola ibhalansi ye-SCHENCK evela eJalimane, imishini yokuhlolwa kobulukhuni evela e-US, umshini wokuhlola i-ow-rate, amanzi nomshini wokuhlola ohlangene wokubacindezela.
■Ukuhlukanisa amaqembu: kufika ku-500T
■Imishini yokujova: UKrauss maffei waseJalimane, HAITIAN, YIZUMI. Ukunyakaza okufanayo, uzibuthe wokuqinisa / ukubamba u-hydraulic, nge-5-axis robot, i-barrel ret yeMucell, kuze kufike ku-3300T.
Langaphambilini Izithuthi Division
Olandelayo: Indawo yokulahla